साढे ९ लाख नपाएपछि उपतलाल चौधरीले छोडे उखु खेती- फिचर - कान्तिपुर समाचार
साढे ९ लाख नपाएपछि उपतलाल चौधरीले छोडे उखु खेती
पुस ३, २०७७ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — दुई वर्षअगाडि उपतलाल चौधरी काठमाडौं आएका थिए । त्यतिबेला उनले अन्नपूर्ण चिनी मिल मालिकलाई भेटेर उखुको बक्यौता रकम मागे । एकाउन्टेनसँग पनि कुरा राखे । मिल मालिकले पैसा खातामै पठाइदिने आश्वासन दिएपछि घर फर्केका थिए उनी । तर, तोकेको समयसम्म पनि उनको खातामा पैसा चढेन । 'भोलि दिन्छु, पर्सि दिन्छु मात्र भने तर अहिलेसम्म पैसा हालेको छैन,' उपतलाल सुनाउँछन् ।
पैसा पाउने आसमै दुई वर्ष बित्यो । गत वर्ष उखु किसानहरुले काठमाडौं आएर आन्दोलन गरे । तर, उपतलाललाई लागेको थियो 'मिल मालिकसँग भेटेरै आएको छु खातामा पैसा हाल्देलान् नि !' गत वर्ष आन्दोलनमा आएका केही किसानका खातामा पैसा राख्यो मिल मालिकहरुले । तर, उपतलालको खाता खाली नै रह्यो । आन्दोलन नगरी पैसा नपाउने ठानेपछि यो पटकको उखु आन्दोलनमा सर्लाही रामनगरबाट उपतलाल पनि सहभागी छन् ।
'यसपाली त जसरी पनि पैसा लानुपर्‍यो भन्ने सोचेर आएँ । मैले कृषि विकास बैंकबाट ऋण लिएको छु । महिना/महिनामा ब्याज तिर्नुपर्छ । महामारीले गर्दा ८ महिना कति दु:ख भयो त्यो त सबैलाई थाहै होला,' उनी भन्छन्,'अब जबसम्म हाम्रो पैसा खातामा हाल्दैन तबसम्म आन्दोलन गर्न छोड्दैनौं ।'
समयमै उखुको पैसा नपाउँदा २ बिघा जमिन धितो राखेर १० लाख ऋण लिएका थिए उनले । अहिले बैंकको ब्याज तिर्नसमेत गाह्रो परेको उनी सुनाउँछन् । 'हाम्रो पहिला नै योजना हुन्छ । खेतीबाट यति पैसा आउँछ यता खर्च गर्ने भनेर । तर उखुबाट पैसा नआएपछि काम बिग्रन थाल्यो । त्यसैले ऋण लिएँ, 'सुनाए,'जसोतसो ब्याज तिर्दैछु ।'
छ दिनदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलनरत उनी भन्छन्,'सरकारले वास्तविक किसानको पैसा मिलाइदिनु पर्ने हो । तर मतलब नै छैन सरकारलाई हाम्रो ।'
काठमाडौं आउन साहुसँग १० हजार ऋण लिएका उनलाई त्यसकै ब्याजको चिन्ताले पनि सताउन थालेको छ । मिलले पैसा किन नदिएको जस्तो लाग्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दा उनले जवाफमा भने, 'म त सरकारलाई दोषी देख्छु । हामी कति दु:ख गरेर उखु लगाउँछौं । उखु नगदे बाली भनेर हामीले उखु लगायौं । उखुमा बढी पैसा आउँछ रे भनेर हामीले लगायौं । तर मिल मालिकले त हामीलाई बर्बाद नै गर्‍यो । सरकारले भन्यो भने त उद्योगीले पैसा दिनुपर्छ नि !'
नेपाललाई कृषि प्रधान देश भने तापनि किसानहरुलाई सरकारले कुनै सेवासुविधा नदिएको उपतलालको गुनासो छ । किसानले समयमै मल पाउँदैनन् । भारतबाट मल ल्याउँदा नेपाल र भारततर्फको भन्सारमा निकै समस्या झेल्नुपर्छ । चोरी गरेर मल ल्याएको झैंको व्यवहार खेप्नुपर्छ किसानले । त्यसैले उपतलाललाई लाग्छ यो सरकार किसानको होइन । 'किसानको सरकार भएको भए हामी किसान सर्लाहीबाट काठमाडौंको यो चिसोमा आएर किन आन्दोलन गर्नुपर्थ्‍यो । हामीलाई भन्ने मात्र किसान हो । न समयमा हामीले बिउ पाएका छौं न उखुको भुक्तानी,' आक्रोशित हुँदै भने, 'हामीले उब्जाएको धान कहाँ बेच्ने त्यसको पनि ठाउँ छैन । हामी बेच्न जनकपुर, वीरगन्ज जानुपर्छ । मुखले मात्र भन्ने होइन । यो सरकारले किसानको केही गरेको छैन । किसानलाई मार्ने काम गरेको छ यो सरकारले ।'
सरकारले यो पटक उधारो सम्झौता नगर्ला भन्ने आस राखेका छन् उपतलालले । यसपाली आफूले पाउनुपर्ने ९ लाख ५० हजार रकम पाएपछि मात्र सर्लाही फर्कने उनको योजना छ । 'मिल मालिकले पैसा नदिएर त सरकार कहाँ आएको छु । सरकारलाई गुहार्दैछु, हाम्रो पैसा दिलाइदिनुस् । अब त पैसा लिएर नै जान्छु । जबसम्म नगदी सम्झौता हुँदैन हामी जाँदैनौं,' उनले भने ।
उपतलालले उखु खेती गरेको १३ वर्ष भयो । तर, चिनी मिल मालिकले समयमै पैसा नदिनाले उनले यो पेसा नै छोडेका छन् । पोहोर सालदेखि नै आफूले उखु खेती छोडेको उनले सुनाए । 'अब खाली धान, गहुँमात्र लगाउने । उखुबाली नलगाउने । अरु बाली त काटेर घरमा ल्याउन मिल्छ । तर उखुबाली कहाँ राख्ने । त्यो राख्ने ठाउँ त हुँदैन । त्यो त सुकेर खत्तम हुन्छ । त्यो त कारखानालाई दिनुपर्छ । त्यसैले मैले उखु उब्जाउन छोडिदिएँ,' उनले भने ।
अब त भाइहरुसँग बस्न पनि लाज लाग्न थालिसक्यो उनलाई । 'पाँच दिनदेखि यहीँ बसिरहेको छु । यहाँ बस्न लाज लाग्न थालिसक्यो । भाइहरु आफै कामदारहरु हुन्,' उनले भने ,'कहिलेकाहीँ तरकारी लिएर जान्छु । ऋण गरेर ल्याएको पैसा सकिन लाग्यो । तराईंमा बस्ने मान्छेलाई यता धेरै चिसो लाग्छ । बिहान शीत तपतप चुहिन्छ यहाँ ।'
प्रकाशित : पुस ३, २०७७ २०:५८
किसानका भोगाइमा नाटक मञ्‍चन
पुस २, २०७७ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — सेतो कुर्ता, सेतै धोती अनि गलामा पहेंलो रङको गम्छा भिरेका व्यक्तिलाई बीचमा घेरेरे बसेका छन् केही मानिस । कालो रङका लुगा पहिरेका उनीहरु एकैस्वरमा गाउँछन्, 'तुम्हारे भरोसे किसान बाबु मिल खोललियै... ।' अर्थात् 'तिम्रो भरोसामा हामीले मिल खोलेका छौं ।' गीत गाउनेहरु हुन्, चिनी मिल मालिक । अनि माझका बसेका पात्र हुन् उखु किसान चिनी नारायण ।
यो दृश्य हो, बिहीबार उखु किसान आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै माइतीघरमा देखाइएको सडक नाटकको । 'तिमी चिन्ता नलिइ उखु उब्जाउ, तिम्रो सबै समस्याको भार हामी उठाउँछौं' उखु किसानकै भरमा मिल खोलेका मालिकले यत्ति भनिसकेपछि चिनी नारायणले बाँकीका सबै खेतमा उखु लगाउँछ । महाजनसँग चर्को ब्याजमा ऋण लिएर खाद्द छर्छ । खेतमा उखु बढ्दै जान्छ, चिनी नारायण खुसी हुँदै जान्छ । खेतका प्रत्येक उखुलाई हेर्दै सपना बुन्छ, 'यसपाली १५ क्विन्टल उखु हुन्छ ।'
उखु बेचेर कमाएको पैसाले छोरीको बिहेमा लिएको ऋण तिरिदिने योजना बनाउँछ । हुर्कँदै गरेका हरेक उखुका डाँठसँगै उसका अनेकन सपना पलाउँदै जान्छ । घरमा गाईवस्तु बिरामी छ । तर चिनी नारायणलाई उखुकै चिन्ता छ । उ रातदिन उखुकै रेखदेखमा बिताउँछ । उता महाजनले पत्नीसँग पैसा मागेरै किचकिच गरिरहन्छ । एकदिन खानामा रोटीमात्रै दिँदै चिनी नारायणलाई पत्नीले भन्छ, 'बाँकीका सबै खेतमा उखु लगायौं । चिनी मिलले पैसा दिएको छैन । अब यो बाहेक के खान्छौ ?, अर्को सालदेखि यो पनि पाउँदैन ।'
दृश्य हेरेर माइतीघरमा आन्दोलित उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ राय मुसुक्क हाँसे । अन्य किसानहरु पनि एकअर्कालाई हेर्दै गललल हाँसे । सर्लाही छोडी आएका पत्नी अनि ती भोगाइलाई नाटकमा दुरुस्तै पाउँदा पाँचदिनदेखि आन्दोलित किसानको मुहारमा एकैछिन हाँसो छायो । कलाकारहरु आन्दोलित किसानको ठीक अगाडि नाटक प्रस्तुत गर्दैछन् । मञ्‍चन भइरहेको नाटक हेर्न किसानसँगै अन्य दर्शकको भीड बढ्दै गयो ।
मल ल्याउँदा भारत र नेपालतर्फको भन्सारमा किसानले पाउने पीडा नाटकमा देखाइएको थियो । चेकमा समस्या पनि । भारततर्फको भन्सार कर्मचारीको नानाथरी भनाइ सहेर मल भित्र्याउँछ चिनी नारायणले । नेपालतर्फको भन्सारमा तस्करदेखि 'विभिन्न व्यापारीको लागि काम गरेको नमिठो भनाइ सहन्छ । भन्सार कर्मचारीले तस्करी समेतको आरोप लगाउँछन् । मल ल्याउन दुई देशको भन्सारमा चिनी नारायणले पाएको दु:ख हेर्दा उखु किसानको अनुहारमा एक किसिमको मौनता छाएको छ । चिनी नारायणको अनुहारमा देखिएको निराशा उनीहरुको आँखामा प्रस्टै देखिन्छ ।
यो दृश्यले नाटक हेर्ने भीडलाई हँसायो । तर, आन्दोलित उखु किसान हाँस्न सकेनन् । सायद हरेक पटक मल ल्याउँदाको पीडा फेरि उनीहरुले चिसो सडकमा अनुभव गरे । नाटकको यो दृश्यलाई त ७० वर्षीया गगनदेव रायले घत मानेर हेरे । आफ्नो आधा उमेर नै उखु पेसामा लगाएका गगनदेवले मलकै लागि भन्सारमा कत्ति चोटी हात जोड्नु पर्‍यो होला ?
सरिता शाह निर्देशित नाटकले आन्दोलित किसानका समस्या, पीडा समेटेको छ । उखु किसानको ऋणका समस्या, महाजनको किचकिचदेखि मिल मालिकले पैसा नदिँदा उनीहरुका जीवनमा परेको प्रभावलाई नाटकमा देखाइएको थियो । किसानका व्यथा, संघर्ष र भोगाइ समेटिएको नाटकले वास्तविक चिनी नारायणहरुको कथा बोलेको छ । खेतमा छोडी आएका उखु र देखेका सपना सर्लाहीमै थाँती राखेर चिनी नारायणहरु अहिले आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका छन् । बिहान ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म धर्ना बस्छन् ।
उनीहरु वर्षौंदेखिको उखु बेचेको पैसा उठाउने आसमा काठमाडौं आएका हुन् । सरकारले बक्यौता रकम नदिएसम्म घर नजाने अडान लिएका उनीहरु काठमाडौंको चिसोमा आन्दोलित छन् ।
चिनी थप्दै गुलियो चिया पिएर मिल मालिकहरुले गफिँदै गरेको नाटकको अर्को दृश्य सशक्त छ । एकजना मिल मालिक भन्छ 'किसानले जति आन्दोलन गरे पनि उखु बेच्न हाम्रै शरण पर्नुपर्छ । आन्दोलन गर्ने केही किसानको पूरै पैसा दिउँ । बाँकी किसानलाई केही प्रतिशत रकम दिउँ । अरु त हामीलाई फाइदा नै हुन्छ नि !'
अर्को थप्छ, 'हामीले सय प्रतिशतको २० प्रतिशत यो किसानहरुलाई दिने अनि ८० प्रतिशत हामी लिने । फाइदा हामीलाई ।'
यो दृश्यले पक्कै वर्षौदेखि उखु किसानलाई रुवाएका मिल मालिकको निर्दयीपनलाई देखाउँछ । मिल मालिकले गरेको अत्याचार र ठगीको प्रतिबिम्व गर्छ यो दृश्यले । चियामा चिनी थप्दै गरेको दृश्यमा चिनी नारायण आफैलाई घोलिएको बिम्बात्मक दृश्य पनि नाटकमा देखाइएको थियो । ८ कलाकारको अभिनय रहेको यो नाटकले उखु किसानको जीवनलाई प्रस्तुत गरेको छ । उखु किसानका प्रत्येक समस्या र भोगाइ देखाइएको यो नाटक जीवन्त छ । प्रप्सहरुको प्रयोग निकै सान्दर्भिक थियो । नेपाली र भोजपुरी भाषाका संवाद निकै अर्थपूर्ण थियो । सरिता फाउन्डेशनले प्रस्तुत गरेको यो नाटक छोटो समयमै तयार पारिएको हो ।
'मंगलबार टिममा बसेर नाटकको कथा तयार पार्‍यौं । बुधबार अभ्यास गर्‍यौं । र बिहीबार देखायौं,' नाटककार सरिताले सुनाइन्, 'एकदिनमा तयार पारेको नाटक हो । हामी तराईकै पर्‍यौं, किसानको समस्या हामीलाई थाह भइहाल्छ । हामी आफै पनि किसानकै सन्तान हौं । त्यसैले नाटक तयार पार्न समय लागेन ।'
छोटो समयमै किसानका समस्या र भोगाइलाई नाटकमा प्रस्तुत गर्न सफल भएकी छिन् सरिता । नाटकमा कलाकारहरुले प्रशंसालायक अभिनय गरेका थिए । विजय यादवको अभिनयले चिनी नारायणको भूमिकालाई बलियो प्रस्तुत गरेको थियो । उनले ती सम्पूर्ण किसानको भोगाइलाई आफ्नो अभिनयबाट न्यायोचित ढंगले प्रस्तुत गरे । त्यस्तै चिनी नारायणकै पत्नीको भूमिकामा देखिएकी नाटककार सरिता आफैले पनि आफ्नो पात्रलाई न्याय दिने अभिनय गरेकी थिइन् । नाटकमा विजय र सरितासँगै कलाकारहरु जानुका दाहाल, रेनु योगी, अम्रिता शाह, ज्यासन पण्डित, सञ्जय गुप्ता, कालु पाण्डेको अभिनय थियो ।
प्रकाशित : पुस २, २०७७ २१:४३